दुर्लभ मुटु र मष्तिष्क भएका प्रचण्ड – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठराजनीतिदुर्लभ मुटु र मष्तिष्क भएका प्रचण्ड
कान्तिपुरको परिसंवादमा सम्पादकज्युले मार्मिक प्रश्न सोधेर सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दुर्लभ मुटुको परीक्षण गरे । प्रश्न आफैमा जटिल थियो, छोरा प्रकाश दाहाल र जेठी छोरीको मृत्यु, पत्नीको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था आदि पारीवारिक अप्ठ्याराका बाबजुद पनि राजनीतिमा सक्रिय देखिनुहुन्छ ? यी सबै कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ? जवाफ असाधरण थियो— दुर्लभ मुटु भएका प्रचण्डको ।
उहाँले जवाफमा प्रत्येक दुर्घटना या घटनाले आफुलाई अझ बढी राष्ट्र, जनता र आफ्नो उद्देश्यप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्नेतिर दिमाग जाने गरेको बताउनुभयो । ‘सामान्य मानिसहरुमा चाहिँ यस्ता घटनापछि अलि विक्षिप्त हुने, जिम्मेदारीबाट अलि पछि हट्ने खालका प्रवृत्तिहरु पनि देखिन्छन् । तर मभित्र त्यस्तो आउने गरेन । छोरोको निधन, बढो कठोर थियो । तर मैले त्यसै दिनबाट संकल्प गरेँ कि मैले अब नेपालका सबै युवा युवतीमा प्रकाश देख्नुपर्छ र तीनका निम्ति मैले अझ दश गुणा बढी शक्तिका साथ काम गर्नुपर्छ । मैले त्यसै गर्ने गरेको छु । मेरो छोरीको मृत्युपछि पनि मैले त्यही गरेँ ।’ उहाँले बढो सहासका साथ भन्नुभयो ।
हामी नौ जवान भनौदाहरु आफ्नै जीवनको अभिभारा बोक्न नसकेर सडक र गल्लिहरुमा बरालिंदै छौं । तर, ६५ नाघेका प्रचण्डमा शारिरिक र मानसिक दुवै पक्षबाट देशको अभिभारा बोक्न सक्ने होसपूर्ण युवा जोश छ । जीवनको उत्तरार्धमा पनि राष्ट्र र जनताका लागि दश गुणा सक्रियता बढाउने संकल्प गर्ने सक्ने मुटु छ । देश आफै बन्दैन, बनाउनुपर्छ । देश बनाउन यस्ता मुटुहरु चाहिन्छन् । यसका लागि हरेक म आफै जाग्नुपर्छ । यस्ता मुटुहरुको दुर्लभता डरलाग्दो कुरा हो ।
देश र जनताका लागि सक्रियतापूर्वक काम गरेर सम्पूर्ण जीवन बिताउने संकल्प गर्ने मुटुहरुको संख्या बढ्दै जानुपर्छ । सत्तारुढ नेकपाले देश र जनताका लागि बेहिसाब काम गरोस् । नेपालको राजनीतिले प्रचण्डकाजस्ता थुप्रै मुटुहरु जन्माउन् । ओली सरकारप्रति जनताको आक्रोश कम हुँदै जानेछ भन्ने आशा गरौं । भौतिकवादी, मार्क्सवादी अनि समाजवादी मुटुहरुको दुर्लभवता घट्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा गरौं । जर्मनमा जन्मिएका माक्र्स एंगेल्सका मुटु । रुसमा एक सताब्दी अघि जन्मिएका लेनिन स्टालिनका मुटु । चीनियाँ क्रान्तिले जन्माएको माओका मुटु । ल्याटिक अमेरिकन क्रान्तिले जन्माएको चे ग्योभारा र फिडेल क्यास्ट्रोका मुटु । यी संसारकै मानव जातिको प्रगतिका लागि जन्मिएका दुर्लभ मुटु र मस्तिष्कहरु हुन् । यस्ता दुर्लभ मुटुहरु कसरी जन्छन, बेला बखत यस्ता विषयमा पनि बहस गरौं । किनकी फेरि समाजवादी क्रान्तिका लागि यस्तै दुर्लभ मुटु र मस्तिष्कहरु चाहिएको छ । – राजमार्ग डट कम बाट राजकुमार श्रेष्ठको लेख साभार ।